China General tsvimbo humburumbira vagadziri uye bhizimisi Vishi
Maumbirwo etayi-bhar hydraulic cylinder ndeye DAO compact uye yakapusa, idiki pane hydraulic cylinder yeiyo imwechete yekumanikidza kirasi, iyo yekumanikidza inoshanda ndeye 7MPa, 14MPa, iyo cylinder iri 40 ~ 250mm, iyo ambient tembiricha iri ~ 10 ℃ ~ 80 ℃.
Rod mhando hydraulic cylinder inowanzoshandiswa mumuchina maturusi, michina yekuveza, michina yerabha, simbi nemidziyo yesimbi, jekiseni kuumbwa muchina, kufa muchina wekukanda, kumahombekombe kana kuisirwa ngarava.
Iyo hydraulic cylinder ndiyo hydraulic actuator iyo inoshandura iyo hydraulic simba kuita echimakanika simba uye inoita kudzosera kufamba (kana oscillating inofamba) munzira yakatwasuka.Iyo yakapfava muchimiro uye yakavimbika mukushanda. Kana ichishandiswa kuona kudzokedzana kufamba, iyo yekudzora mudziyo unogona kubviswa, uye hapana gwanza rekuparadzira, kufamba kwacho kwakagadzikana, saka inoshandiswa zvakanyanya mumarudzi ese eanogadzira hydraulic system.
Iko kuburitsa simba reiyo hydraulic cylinder yakaenzana nenzvimbo inoshanda yeiyo pisitoni uye musiyano wekumanikidza pamativi ese ari maviri. Iyo hydraulic cylinder yakanyatsogadzirwa nesirinda dhiramu uye humburumbira musoro, pisitoni uye pisitoni tsvimbo, yekuisa chisimbiso, yekugadzirisa mudziyo uye yekushandisa chiutsi. .Buffering zvishandiso uye chiutsi zvigadzirwa zvinoenderana nesarudzo yekushandisa; zvimwe zvishandiso zvakakosha.
Hydraulic dhiraivha ane masilinda uye mota dzinoshandura kumanikidza simba remvura kuita zvemagetsi simba uye kuburitsa iyo.Cylinder inonyanya kuburitsa mutsetse kufamba uye simba.
Hydraulic cylinder ine akasiyana mafomati, zvinoenderana neakasiyana maitiro eayo mashandiro inogona kuganhurwa kuita piston mhando, plunger mhando uye swing mhando nhatu mapoka, zvinoenderana nemhando yekuita iyo inogona kuve yakakamurwa kuita kamwechete kuita uye kaviri kuita.
Pisitoni humburumbira, plunger humburumbira inonyanya kushandiswa mu: michina, yakadai seyekuchera; Tsvagurudzo yesainzi, senge yeyunivhesiti yezvivakwa murabhoritari.
Plunger cylinder inoshandiswa kumanikidza yekuyedza muchina, senge Ji 'nan goridhe bvunzo, fungisisa muyedzo muchina wekuongorora zvinhu.
General tsvimbo humburumbira ISH70-140 CA
General tsvimbo humburumbira ISH70-140 FA 2
General tsvimbo humburumbira ISH70-140 FA
General tsvimbo humburumbira ISH70-140 LA
General tsvimbo humburumbira ISH70-140 TC
General tsvimbo humburumbira ISH210 CA
General tsvimbo humburumbira ISH210 FA
General tsvimbo humburumbira ISH210 LA
Pashure: Gasi-mvura booster mafuta humburumbira
Zvadaro: Mutete hydraulic humburumbira HT